यस्तो अनौठो शैलीमा ठगी गर्ने पक्राउपछि प्रहरी नै चकित ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यस्तो अनौठो शैलीमा ठगी गर्ने पक्राउपछि प्रहरी नै चकित !
निज कामतीलाई आइतबार आइएमईबाट रकम लिई हिँडेको अवस्थामा सिरहामा फेला पारी प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । उनी उपर जिल्ला अदालत सुनसरीबाट ठगी मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रकृया बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।यस्तो तरिकाले तपाईपनि ठगिन सक्नुहुन्छ । सचेत रहनुहोस् । सचेत रहन सबैमा सेयर गर्नुहोस् ।
अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी कोरोना संक्रमण